बेबी पालना - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा नर्सरी खाट
1 बेबीले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ
2 नवजात बच्चाहरु को लागि बेबीिंग बिल्कुल सही छ
3 प्रत्येक स्वादको लागि दायाँ पालना
4 सजिलो बच्चा
5 धेरै आमाबाबुसँग बेबिड किन धेरै लोकप्रिय छन्?
6 कस्ता प्रकारका बच्चाहरू छन्?
7 उच्च गुणस्तरको बालिका
बेबीले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ
नवजातको लागि एक cuddly, शांत स्थानको आवश्यकता पर्दछ। पहिलो तीन महिनाको दौडान एक पाडा सुत्ने ठाउँको रूपमा उपयुक्त छ। अतिरिक्त बेड र एक ट्रली को अतिरिक्त, एक पाडले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। आमाबाबुको बिस्तारमा बिस्तारै बिस्तारै एक पाडल हर जगह लिन सकिन्छ। धीरे वजन गरेर, बच्चाहरु राम्रो हुन सक्छन।
नवजात बच्चाहरु को लागि बेबीिंग बिल्कुल सही छ
शिशुहरू बिस्तारै माछाको पेटमा हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको लागि सजिलो पालनामा छिट्टै सजिलो हुन्छ। बेबीहरू प्रायः कास्टर्सहरूमा सुसज्जित छन्। तदनुसार, तिनीहरू दिनको समयमा कोठामा धकेल्न सकिन्छ, जहाँ आमाबाबु पनि बाँकी छन्। यसरी आमाबाबुले सधैं आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्नु भएको छ र उनीहरूको निन्द्रा निगरानी गर्न सक्छन्। जब बच्चाहरू दिनभरि नर्सरीमा सुत्छन्, आमाबाबुले तिनीहरूलाई हेर्नको लागी खुल्ला खुट्टाहरू सामान्यतया जगाए। वजनहरू नरम, उपयुक्त गद्दाहरूसँग सुसज्जित छन्।
प्रत्येक स्वादको लागि दायाँ पालना
बेबीहरू विभिन्न आकारहरूमा उपलब्ध छन्। अधिकांश पाडलहरू उच्च गुणस्तरको काठबाट बनेका हुन्छन्। हेरचाह गर्नु पर्दछ कि काठ चिसोबाट मुक्त छ, त्यसैले बच्चाहरू घाइते हुन सक्छ। विशेष गरी उत्तरदायी काठ वा एक विकर को टोकरी बाट बनेको बच्चाहरु हो। आमाबाबुले यो धेरै आधुनिक जस्तै मन पराउँछन् भने पनि सेतो मोडेलहरू वा एल्युमिनियम फ्रेमसँग संयोजनमा कपडा बनाइएका क्रैडलहरू पनि खरीद गर्न सक्छन्। यदि आमाबाबुले आफ्नो बच्चालाई ठूलो कोटमा राख्न चाहँदैनन् भने, उनीहरूलाई नरम गद्दे, एक आकाश र एक घोंसलासँग पालनाको लागि छनौट गर्नुपर्छ। यसैले बच्चाहरु लाई राम्रो तरिकाले सुरक्षित गरिएको छ। गद्दीको आयामले 37 एक्स 70 को 45 एक्स 90 सेन्टिमिटरको बीच फरक हुन्छ। चूंकि बच्चाहरु लाई केवल सानो सानो झण्डा सतह छ र बच्चाहरू छिटो बढ्दै जान्छ, एक पाड्री मात्र तीन महिनाको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, अधिक से अधिक आमाबाबुले प्रयोग गरिएको पाडाडेड किन्न छनौट गर्दछ। अन्य परिवारहरूले पाडडेहरूमा अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई पास पारेर एक किसिमको परम्परा सिर्जना गर्छन्।
एक आकाश बिस्तार संग वजन विशेष रूप देखि राम्रो र आरामदायक छ। जबकि काठ को कुछ भागहरु छड़ी संग तैयार गरियो, अरु एक पैड वाला ट्यूब देखि बनाइन्छ। बच्चाहरु को बेड या पाडल को लागि, हेरचाह को संधै ले लिया जाना चाहिए कि बार 6,5 सेमी र 4,5 सेमी भन्दा कम हो। कैदीहरूद्वारा क्र्याडलहरू कोठामा कोठाबाट चुपचाप धकेल्न सक्छन्। प्रायः एक हो खाट बिस्तर लिनन, एक पाना र एक सुन्दर कपडाको साथ। एक टाउको तकियाले ढाक्नु पर्दछ, किनकि बच्चा सम्म सम्मको सुत्न सक्छ। जाडोमा, एक निलो थुल धेरै उपयुक्त छ।
धेरै आमाबाबुसँग बेबिड किन धेरै लोकप्रिय छन्?
बेबी बेड बेडरूम वा बालबालिकाको कोठामा एकै ठाँउमा बस्न सक्दैन खाट, तिनीहरू ठूलो महलहरूसँग सुसज्जित छन् ताकि तिनीहरू सजिलै धक्का लिन सकिन्छ। धेरै पाङ्ग्राहरू वायु टायरहरूमा सुसज्जित छन्। यसले पाड धक्का गर्दा ठूलो आवाज रोक्छ। यसको अतिरिक्त, हावा टायर्स धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ। पाडाको आयाम सामान्यतया स्टुबेनेभेन मा समान हुन्छन्। एक क्लासिक बच्चा पालना गोल किनारों संग सुसज्जित छ। तिनीहरू तपाईंको सुरक्षित प्रस्तावित सबै भन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा शान्त स्थान हुन्। अधिकांशका पाडाहरू निम्न विशेषताहरूसँग सुसज्जित छन्:
- आकाश ध्रुव सहित बालबालिकाका साथमा स्वर्ग
- उपयुक्त गद्दे
- वार्मिंग घोंसला
- प्यारा रूपाणहरू संग छातीको छाती
यदि तपाईंले बच्चाको पालनामा निर्णय गर्नुभएको छ भने, तपाईंले मात्र पालना गर्नु हुँदैन कि पाडल गोल र उच्च गुणस्तरको हो। यो पनि कपडाहरू लैजान सकिन्छ जुन हटाउन सकिन्छ र वाशिंग मशीनमा सफा गर्न सकिन्छ। छाया सीधा एक पर्खालमा वा कुनामा राख्नु हुँदैन। यस अवस्थामा, कुनै राम्रो वायु संचलन सम्भव छैन। धेरै प्रसिद्ध ज्ञात निर्माताहरु बच्चाहरु-वजन मशीनहरु को उत्पादन मा विशिष्ट छ।
कस्ता प्रकारका बच्चाहरू छन्?
Babywings स्किड, स्विंग र ढलान मा प्रतिष्ठित छन्। एक स्लेज प्रायः चट्टान पालनाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो मोडेल एक पाडल आधा बेक्ड भएको छ, भित्री भागहरु लाई सुसज्जित। यसको माध्यम ले, पाडल आंदोलनहरु द्वारा चकित छ। केही पाडलहरूमा, चार अतिरिक्त प्लीयहरू पाडल अझ राम्रो राख्नका लागि छन्। तपाईंको सहयोगको साथ बच्चा पालनाले तपाईको छनौटको कुनैपनि स्थानमा सार्न सक्दछ बिना तपाईंको बच्चा जगेडा बिना। यदि तपाइँ चट्टान प्रकार्य सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सजिलैसँग रोलर्सहरू माथि बढ्न सक्नुहुन्छ। धावकहरू कम अन्तमा गोल आकार छैन। नतिजाको रूपमा, पाडले धेरै सजिलैसँग चल्न सक्दैन। यो प्रभाव निर्माताओं द्वारा चाहियो। चट्टान गर्दा बच्चा पालना स्वचालित रूपमा घटाउँछ। यसरी, स्वचालित स्वत: ब्याकअप उपलब्ध छ।
अर्कोतर्फ, एक पेंडुलम निश्चित फ्रेम संग सुसज्जित छ। यो निलम्बन जुन सार्नु पर्छ मा सारिएको छ। एक पारंपरिक पेंगलुल लक तालमेल संग सुसज्जित छ। यसले तिनीहरूलाई फाइदा दिन्छ कि तिनीहरूले अपार्टमेन्टको कुनै पनि ठाँउमा पाडल राख्न सक्छन्। यद्यपि, यदि तपाईं मात्र एक विशिष्ट स्थानमा पाडल प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ सजिलैसँग रोलर्सहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। पाडले यसरी सुरक्षित खरिद प्राप्त गर्दछ र अधिक स्थिरता पाउँछ। आफ्नै आफ्नै आन्दोलनका साथ, तिम्रो बच्चाले पालनालाई चट्टानमा ल्याउनेछ। जब ताल्चा प्रकार्य रिलीज भएको छ, पालनाले तुरुन्तै अघिल्लो र पछि बन्द गर्दछ। यदि तपाईं फ्रेम र बच्चा पालनाको निचला भागको माध्यमबाट बोल्ट धकेल्नुहुन्छ भने, लक गर्ने प्रकार्य सक्रिय छ र पालना अब चालु छैन।
बच्चाहरु बच्चा बेबी बिस्तर बेबी बिस्तर कोट कालीन पोट +9tlg
बच्चाको पातलो सेतो incl।9tlg। सहायक उपकरणहरू
4 चल योग्य रोलरहरू लचीलापनका लागि
2 पार्किङ ब्रेक
हटाउन सकिने आकाश
चट्टान प्रकार्य पत्ता लगाउन सकिन्छ
एक झुन्डिएको पालने सामान्यतया छत मा एक विशेष डिजाइन माउन्ट छ। तर खाट पनि यस्तो सीढी अन्तर्गत रूपमा फरक स्थानमा माउन्ट हुन सक्दैन। , तपाईंले आफ्नो खाट सुरक्षित स्टप उद्धार गर्न अनुमति अनुरूप dowels र तनाव केबल र ठोस Springs, यो मात्र स्थिर स्विंग हुक प्रयोग गर्नुहोस्। एक झुन्डिएको पालने एक खेल मैदान स्विंग shoved भइरहेको हो। को कोमल पुस मार्फत पालने फिर्ता र निस्कने आफ्नो बच्चाहरु संग rocking। को वजन मंच को बास्केट व्यक्तिगत समायोजित हुन सक्छ।
घाइतेको विशेष सुविधा बलियो स्प्रिंग्सहरू हुन्। यो पालना र छत निलम्बन बीचको तनाव हो। केवल एक वसन्तको मद्दतले टोकरीको लागि यो सम्भव छ। बच्चाको सहिलो आलोचनाले तपाईंलाई आमाको शरीरमा कोमल आचरणको सम्झना गर्नेछ। यसले सजिलै बच्चालाई सान्त्वना दिन सक्छ र बच्चा गहिरो निद्रामा छिट्छ।
उच्च गुणस्तरको बालिका
सबैभन्दा लोकप्रिय पाडल मध्ये एक Serina देखि 9-भाग बच्चा पाडल हो। सेतो बच्चा पालना चार जंगली रोलर्स संग सुसज्जित छ। पाडलले दुई पार्किङ ब्रेकहरू राख्दछन् ताकि बच्चाले चल्दा रहनेछ जब बच्चा चल्छ र बायाँदेखि दायाँ चट्टान गर्दैन। प्यारी बच्चा पालना एक उज्ज्वल आकाश संग सुसज्जित छ। यदि आवश्यक छ भने, आकाश पनि हटाउन सकिन्छ।
रोबा वान Komplettwiegenset, खटिया (40x90cm), काठ, सेतो, bassinet र पालने समारोह Wiegenset Incl ताला संग। पूर्ण उपकरण र बच्चा बिस्तर (80x80cm) प्रदर्शन
पूरा तौल सेटमा बच्चा पालना, बच्चाको रजाई, गद्दा, नेस्ट, ब्रेक रोलरको साथ आकाश पोल र रोल सेटको साथ बादल सेट (तकिया र कम्बल) हुन्छ।
वजन उच्च गुणवत्ता फ्ल्याट बारहरू र लकिंग घुंडी संग पालना समारोह। दलाल क्रडल लकमार्फत बासिनेट वा बेबी काटमा समायोजित गर्न सकिन्छ।
बेबी वुड जन्मदेखि लगभग6महिना सम्म उपयुक्त हुन्छ वा बच्चाले आफैंलाई माथि तान्न सक्छ।
प्यारोको मायालु डिजाइन कपडा प्रदूषक-परीक्षण कपास मिलेर एक इष्टतम निद्रा वातावरण प्रदान गर्दछ। ओछ्यान सबै वर्षभर टिकाऊ र सफा गर्न को लागी उपयोगी छ।
2 पार्टी बेडिंगमा 40 x 35 सेमी तकियाहरू र 80 x 80 सेमी कभरहरू छन्। बच्चाहरूको रजाई भएको ओछ्यानमा एक सास पार्ने र तापक्रम-क्षतिपूर्ति मौसम फाइबर हुन्छ।
ठूलो फाइदा यो छ कि बच्चा पालना उच्च गुणस्तरमा प्रशोधन गरिएको छ। यसको साइजको कारण यो6पुग्न सक्छ। जीवनको महिना यसमा 90 एक्स 40 सेन्टिमिटर गद्दा क्षेत्र छ र एक नरम फोम गद्दे छ। यसले तपाईंको बच्चालाई राम्रोसँग ठुलो पार्छ। अर्को विकल्प रोबा पूर्ण सेट हो। यस मोडेलको साथमा पाडले9भागहरू समावेश गर्दछ। सेट मा बच्चा पालना, एक आकाश, एक आकाश पोल, एक बच्चा बिस्तर र एक नरम गद्दा समावेश छ। बिस्तर लिनन दोस्रो हो र एक हेड तकिए र 80 एक्स 80 सेमी ठूलो कंबल समावेश गर्दछ। पाडल एक सेतो रंग छ र यसैले केटा र केटीहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गद्देमा 90 X 40 सेन्टिमिटरको गद्दा क्षेत्र छ। सेरिना बेबीले जस्तै, यो मोडेल क्यास्टरहरूसँग र सुसज्जित छ। यसले व्यक्तिगत प्रयोगलाई सम्भव बनाउँछ। यदि तपाईंको बच्चा अझै पनि सानो छ भने, तपाईंले प्रदान गरिएको घोंसले प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसले तिनको बच्चालाई अझ बढी लुगा र न्यानो बनाउँछ। यो टाउकोमा पछाडि लुगाको बारहरूसँग टकराउँदैन। रोबाको पाडलको वजन कम हुन्छ, ताला लगाउने र स्थिर लक।
अर्को लेखखाट गद्दे